‘Ndinorohwa nevana vemurume’ | Kwayedza
‘Ndinorohwa nevana vemurume’
10 Jan, 2020 - 00:01	 2020-01-09T18:14:49+00:00 2020-01-10T00:00:22+00:00 0 Views
IMWE shirikadzi inoti iri kushaiswa rugare nekushungurudzwa nevanasikana vemurume wayo nekugara ichirohwa.
Eveline Maromo akazvuzvurudzira Marciline Katsetula naPerpetual Katsetula kudare reHarare Civil Court achida gwaro rerunyararo.
Mutongi Noah Gwatidzo akapa Maromo gwaro rinomuchengetedza.
Maromo anoti vana vemurume wake vamupfidzisa sezvo vachigara vakamurova nekumutukirira.
“Vasikana ava vana vemurume wangu asi kubva pashaya murume wangu munaKubvumbi, handisati ndambowana zororo nevana ivava.
Vanouya vachinditukirira, handizive kuti imhosva here kuti murume wangu akashaya.
“Vakambouya vakandirova, Perpetual uyu akandiruma vakabva vakiya pamba ndikaita 3 days ndisingakwanise kupinda mumba,” anodaro Maromo.
Anoenderera mberi achiti, “Vanhu vanotove nedzimba nemhuri dzavo asi vanouya kuzondishungurudzira pamba pangu.
Vanonditi imba haisi yangu saka ndinofanira kubva asi imba iyi takaitenga nemurume wangu, kunyangwe hazvo iri muzita remurume.
“Hatina kumbobvira tagara nevana ava murume wangu achiri mupenyu.”
Marciline anoti haatuke Maromo asi kuti anovarambidza kusvika pamba pababa vavo.
“Amai ava vari kuvanza chokwadi, handivatuke ini.Ivo vanotirambidzirei kusvika pamba pababa vedu? Kurwara kwese kwaiita baba ndini ndakavachengeta, ivo vakavasiya vachiti isu tiite zvababa vedu nekuti vaiti varambana. Baba chaivo vakatoti imba haisi yamhamha vane sitendi yavakatopihwa,” anodaro.
Marciline anoti vanoda zvinhu zvababa vavo zvavakasiya pamba panogara Maromo.
“Handivashungurudze, kumba kwavo ndakakusvika mumwe musi wandakapererwa nemari ndisati ndasvika kumba kwangu. Ndakatoendako kuti ndigomirira bhudhi vangu kuti vandipe mari yekuwedzera.
“Hanzvadzi nemwana wavo ndivo vakatondirova ndikatozomhan’ara kuBorrowdale Police. Handina dambudziko hangu nekusasvika kumba ikoko asi zvinhu zvababa vedu tozvida,” anodaro.
Perpetual anotiwo, “Handinetsane navo ini. Hapana hangu chandingade kumba ikoko, handina ndava navo.”
Akapondera mukadzi kuSA23 Jul, 2020